Anyị nwalere UMI Touch | Gam akporosis
Ọzọkwa anyị ga-enyocha ọnụahịa ọhụrụ nke Android site na akara nke China nke na-enweta isi na ịrị elu ugwu dị ka ụfụfụ. N'okwu a, taa anyị nwere obi ụtọ na obi ụtọ dị ukwuu nke inwe ike nyochaa nke ọma UMI Touch, nke anyị nwere ike ịtụle dị ka ezigbo ọnụ maka gam akporo n'etiti, gam akporo dị ala n'etiti, nke kachasị iche bụ na, na mgbakwunye inwe mkpisiaka agụ ike n'ime Home button otu n'ime ndị kasị mma na m nwere ike onwe nwalee, ọ na-agụnye dị ka ọkọlọtọ Android 6.0 Marshmallow na mma 5,5 ″ IPS ihuenyo na FullHD mkpebi, 3 Gb nke Ram y Octa isi 1.5 Ghz processor. Niile maka ọnụ ahịa dị ịtụnanya Gwọ ọnụahịa euro 137,99 gụnyere.
Na vidiyo agbakwunye na nkụnye eji isi mee nke a nyocha miri emi nke UMI Touch, ị pụrụ ịhụ na unboxing na ezigbo ọrụ nke ọnụ na ezigbo ogeMa n'okwu nke ngwa na egwuregwu, ige ntị na ụda dị ike nke ọnụ, ịlele etu mkpịsị aka mkpịsị aka jikọtara na bọtịnụ Home na-eme ma ọ bụ hụ ka ezigbo IPS LC ihuenyo nwere mkpebi FullHD si dị mma. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị pịa «Nọgidenụ na-agụ nke a post» Ga-ahụ okpokoro dị mma nke ị ga - ahụ n'otu nkọwapụta nkọwapụta nke UMI Touch, na mgbakwunye na ịmara ụzọ mbụ isi uru nke ọnụ yana ntụpọ kachasị njọ ma ọ bụ enwere ike na ihe iji melite na anyị achọta na UMI Touch.
1 UMI Touch Nka na ụzụ nkọwa
2 Ihe kacha mma nke UMI Touch
2.1 Ihuenyo IPS nwere mkpebi FullHD
2.2 Nhazi na RAM
2.3 Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka
3 Ihe kacha njọ nke UMI Touch
3.1 Aka nke ihuenyo IPS
3.2 A dịtụ elu maka akụkụ nke ọnụ
4 UMI Touch igwefoto ule
UMI Touch Nka na ụzụ nkọwa
Usoro njikwa Gam akporo 6.0 Marshmallow na omenala malite
Ihuenyo 2.5 "5.5D IPS LCD nke nwere 1920 x 1080p FullHD mkpebi na 400 dpi.
Nhazi Mediatek MT6753 Octa isi na 1.5 Ghz
Igwefoto na-aga n'ihu 328 mpx imx13.3 na ihe oyiyi onyonyo - autofocus akpaaka - okpukpu abụọ FlashLED ọkụ na-ekpo ọkụ na oyi - Ndekọ vidiyo na mkpebi FullHD
Igwe n'ihu 553 mpx hi5.3 na oyiyi stabilizer video ndekọ na HD mkpebi na n'ihu FlashLED
Njikọ DualSIM nwere nhọrọ maka MicroSIM abụọ ma ọ bụ otu MicroSIM + MicroSD - Bands: 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz (B5 / B8 / B3 / B2) - 3G: WCDMA 900 / 2100MHz (B8 / B1) - 4G: FDD- LTE 1800/2600 / 800MHz (B3 / B7 / B20) - Wifi 2.5 / 5 Ghz - Bluetooth 4.0 - OTG - FM Redio - GPS na aGPS
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na Home button - mmetụta mmetụta - Smart Tetanụ - Turbo Download -
Akụkụ X x 164 76 8.8 mm
Ibu ibu 190 grams
Ahịa 137.99 Euro na ego 17%
Ihe kacha mma nke UMI Touch
Otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike igosipụta na nke a UMI Aka na enwere m obi ụtọ ịnwale maka ihe dị ka otu izu, anyị nwere ike igosipụta ọtụtụ ihe:
Ihuenyo IPS nwere mkpebi FullHD
Otu n'ime ihe iji gosipụta ihe gbasara UMI Touch enweghị mgbagha mkpebi FullHD na ogo nke 5,5 ″ ihuenyo diagonal. Ihuenyo nke kachasị ncha ọkụ na nke kachasị karịa karịa nke ziri ezi na ebe egosipụtara ezigbo ezigbo agba na-enweghị saturating ha.
Ihuenyo nke siri ike ịchọta na ọnụahịa nke ọnụahịa a na nke a nwere ekele maka nsonye na UMI Aka.
Nhazi na RAM
Banyere ihe nhazi MT6753 na ihe karịrị 3 GB RAM nchekwa, ha na-etolite a zuru okè Nchikota ịkwaga na ezigbo ala na gam akporo 6.0 sistemụ nke UMI Touch na-abịa wee nye anyị ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, ọbụlagodi iji ngwa dị arọ na egwuregwu, na-enye anyị ohere iji Android ọtụtụ ihe n'ụzọ zuru oke.
Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka
Ọ bụrụ na mgbakwunye na ịbụ ihe siri ike ịchọta maka ọnụahịa a, o nwere ihu 5,5 ″ FullHD, anyị na-agbakwunye nke gụnyere akwụkwọ mkpịsị aka na-akpali akpali na bọtịnụ Home, Ihe na-esiwanye ike ịchọta ọnụ yiri nke ahụ, ihe anyị nwere ike ịchọta na UMI Touch na nke ahụ na-arụkwa ọrụ nke ọma, ịbụ otu n'ime sensọ mkpịsị aka kachasị mma nke m nwere ọ pleasureụ nke ịnwale onwe.
Ihe kacha njọ nke UMI Touch
Aka nke ihuenyo IPS
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe na-emegiderịta onwe ya, n'ime ihe kachasị njọ nke UMI Touch anyị ga-etinyekwa ngwụcha ihuenyo, ọ bụ ezie na oge a na-elekwasị anya ahụmahụ bara uru ọ na-enye anyị. Ọ bụrụ n'usoro mkpebi, nchapụta na agba ọ bụ karịa ihuenyo na-atọ ụtọ, n'ihe gbasara mmetụ aka, opekata mpe ruo mgbe anyị ga-eji ya, ọ bụghị otu n'ime ahụmịhe kachasị mma m nwere na njedebe gam akporo.
Ọ bụ ezie na ahụmịhe bara uru maka iji ọnụ ya eme ihe karịa ihe a na-anabata, na iji ya eme ihe, m na-ekwu na ị na-agagharị na Internetntanetị, na-akpọtụrụ netwọk mmekọrịta anyị, na-ezipụ ozi ma na-akpọ oku. Ihe na-echegbu ahụmahụ emetụ mgbe ị na-egwu egwuregwu gam akporo dị nwayọ nwayọ na umengwụ ọ na-efukwa anyị ntakịrị ihe karịa mkpa anyịjide ya.
A dịtụ elu maka akụkụ nke ọnụ
Agbanyeghị na agaghị m etinye ya dị ka ihe na-adịghị mma, ekwesiri iburu n'uche na ọnụ ọgụgụ a nwere ngụkọta nke gram 190, a ibu dịtụ n'elu nkezi nke bụ n'ihi ya nnukwu wuru na-4000 mAh batrị nke ahụ ga - enyere anyị aka inwe nnwere onwe nke ihe dị ka ụbọchị abụọ iji mee ihe maka onye ọrụ gam akporo nkịtị yana nnwere onwe nke ihe dị ka elekere isii / isii na ọkara nke ihuenyo arụ ọrụ.
Metụ dị umengwụ na egwuregwu
Igwe foto na ọnọdụ ọkụ
UMI Touch igwefoto ule
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị nwalere UMI Touch nke ọma. Ezigbo ọnụ gam akporo maka naanị euro 140
Ọ dị ka ọ dị mma! Ọ ga-amasị m ịnwale ya hehe (ihe niile maka ịtụ Huawei P7 na ahịhịa hahaha)
Dịka m ghọtara na ha na-arụ ọrụ na nsogbu ngwanrọ ahụ, enwere olileanya na enwere ike ịkwalite ya site na ngwanrọ
Francisco, agụọla m okwu gị na echiche gị banyere Smart a, enwetara m ya site na Amazon, ọtụtụ mmadụ jiri osisi na-akụ ọdụ a, mana achọpụtara m na ha nwalere ya n'aka nke aka ha, ị meela ya; na echere m na m mere ezi nhọrọ; M ga-enweta ya naanị na May 10 ma ọ dị mma ichere ka ekwuru. Ekele si Paraguay, Asunción.
... dictionary error, ha nwalebeghị ya dịka ị d ị. na m chere ok
Ka anyị hụ enyi, enweghị m mmasị iduhie onye ọ bụla ma ana m anwale mgbe niile m na-eme nyocha, ọ bụ ezie na m na-agwakwa gị ka m jiri obi eziokwu gwa gị na onye ọ bụla, dịka m na-ekwu mgbe niile na nyocha m na isiokwu edere na Androidsis na vidiyo Na vidiyo nke Androidsis, nke m na-atụnyere ha na njedebe nke otu ọnụahịa ahụ, olee otu o si bụrụ ihe ezi uche dị na ya ma bụrụ na ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere Samsung Galaxy S7, LG G5 ma ọ bụ Huawei P9, ntụle ahụ agaghị dị mma ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ a dị oke ala n'okpuru ebe njedebe ndị ahụ dị elu.
Ọ bụ ya mere na mgbe m kwuru na ọ bụ ezigbo njedebe maka onye ọrụ gam akporo gam akporo, onye ọrụ chọrọ ka ekwurita site na netwọkụ mmekọrịta, kpọọ ma zipu ozi SMS, sọfụ ịntanetị, kpọọ egwuregwu n'echebaraghị ya echiche, gee egwu ma ọ bụ were nwayọ foto kwesịrị ekwesị., ebe ahụ, ma jiri ya tụnyere ọnụ nke otu ọnụahịa ahụ, ya bụ, ihe dị ka euro 140, ọ bụ otu n'ime ọdụ kacha mma m nwere ike ịnwale n'echiche niile m na-ekwu na vidiyo na isiokwu .
Ekele enyi gi, echekwala na imere ezigbo ihe.
Da maka raffle ziri ezi? ; P
Obinna 80 dijo
Daalụ nke ukwuu maka ịza ajụjụ na ihuenyo oge! Nọmalị n'ozuzu oge na-kwuru na awa ma ọ bụ ọbụna ụbọchị, ma awa nke ihuenyo bụ n'ezie ihe ndị kasị mkpa data ... Ọ na-enwe ekele! 🙂
Enwere m ọdụm a, ntakịrị ihe karịa otu izu, yana nke ọma, enwere m atụmanya dị ukwuu na ya, ọkachasị n'okwu batrị, yana nke ọma, enwere ụfọdụ ihe na-amasịghị m, yana na anaghị m eso onye edemede ahụ nke a nyochaa .. M na-ekwu:
Ahụ ya dị ezigbo mma, ọ nwere nkwakọ ngwaahịa, wuru nke ọma, mara mma ... mana m ga-ekwu maka ihe m achọghị:
Ihuenyo ahụ, achọpụtara m na enweghị nchapụta ya kwesịrị ịnwe. Etuola m ya na Elephone P2000 ochie m, yana onye ibe m Leagoo Elite 5, na n’eziokwu, n’agbanyeghi na UMI nwere Full HD, ahụghị m ihe dị iche na HD na Full HD, na achọpụtara m ihie ka mma na Leagoo Elite 5, dịka ọmụmaatụ, nke na-adịghị na UMI. Ka oge na-aga, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-ada m ọtụtụ ihe, edere m akara mkpịsị aka m ugboro atọ, n'ọtụtụ ọnọdụ, yana ọ dị obere na ịtinye mkpịsị aka m ozugbo na-emeghe ekwentị ahụ, achọrọ m ime ugboro abụọ na atọ.
Ihe ọzọ nke anaghị m ahụ nke ọma, nke ahụ na-agakwa na njedebe, bụ oge batrị ahụ. Enweghị oku, (Adịghị m eme ihe ọ bụla) naanị na ole na ole, na obere ihe ọzọ, batrị ahụ dị naanị 36 awa, ma eleghị anya ọ dị ntakịrị. N'ileghachi anya na ngwa ndị kachasị eri, achọpụtara m na Wi-Fi na-eri ihe kachasị. Na-ele anya na ịntanetị, ahụrụ m na nke a bụ nsogbu na OS, ya bụ, gam akporo 6, mana ọ bụ ihe UMI kwesịrị ịkwado, ma ọ bụ ọzọ, ebe ọ wụnyechara lollipop nke android, Mgbe ụfọdụ ịwụnye nke ikpeazụ anaghị enye ezigbo nsonaazụ ... J.Randall 5, nwekwara batrị 4000, ma were ụbọchị atọ nwayọ. (nwere lollipop android)
Ka o sina dị, n'agbanyeghị nke a, m ka na-akwado ịzụrụ imetụ umi a, ọ bara uru ọdịda, n'ihi etu mara mma na ọdụ a siri dị gị mma.
Banyere ibu? n'ihi na m na ọ bụ eziokwu .. M ọbụna na-amasị ya .. n'ihi na ndị na-itule obere nye m mmetụta nke a toy.
Ekele na ekele kachasị,
N'ụlọ ọrụ gọọmentị nke Umi, ha na-agbagha ọnụ a:
Ahụmịhe m na Smartphone a mgbe ọnwa nke ojiji abụghị nke kachasị mma, enwere m atụmanya dị mma nke ukwuu n'ihi njirimara ọrụ ya. Nke mbụ, ọnụ na-ekpo oke ọkụ, na-eweta nsogbu mgbe mkparịta ụka ahụ toro ogologo. N'aka nke ọzọ enwere m otu nsogbu ahụ dị ka onye ọrụ ibe m si na mbụ okwu ya na nchọpụta akara mkpisiaka. Ihuenyo nwere ụfọdụ whitish tụrụ. Ibu ahụ dị elu karịa ọdụ ọ bụla ọzọ m nwere n'aka. Ihuenyo mmetụ ahụ na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ ka ihe atụ na ihe ochie lg nexus 5 nke m nwere ezigbo echiche ọ bụ ezie na njirimara teknụzụ ya dị ala. Agbanyeghị, M na-ekpebi ịgbanwe ọnụ, shuffling na xiaomi redmi note pro.
blackview r7 na curved akụkụ etiti, ọ nwere na-anọdụ nke ọma na aka. Maka $ 179.99 ọ gaghị ekwe omume ịchọta ọnụ na njirimara ndị ahụ, ịdị mma m, 4GB nke RAM, enweghịzị imechi ngwa ma mepee ha.
The batrị, ma ọ bụrụ na usoro na-ọma kachasị dị ka ọ na-emekarị itịbe na Blackview ọnụ, anyị na-emesi obi ike nke ezigbo mma oriri.
Zaghachi ndi Mika
Ụtụtụ ọma . O meela ka m daa mbà. Enwere vidiyo nke na-egosi na ọ bụrụ na ịmịe igwe hama (ọtụtụ oge) ọnụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Ọfọn, ọ bụ ụgha. Ọ bụghị iji hama ma ọ bụ agịga. Seme dara n'ala, ime ụlọ nkịtị, enweghị nkume, okwute, mmiri, emere akara na ihuenyo na and. ekwentị gwụrụ. M na-aghọta na ọ dara m, m kpatara na ndị dị otú ahụ, ma na ha na-ere ya m na-asị na o nwere ike na ihuenyo…. The teknuzu ohu, dị mma nke ee, gwara m na ọ dịghị onye ana achi achi na ihuenyo anaghị agbaji. Ma ọ bụ eziokwu, ihe ọ na-ahụ bụ na site n'ịkụ ya n'ike, ọdụ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Batrị ahụ, dịka ọ dị otu dị ka ekwentị m ndị ọzọ m nwere, 24/36 awa, kachasị. 13 mpx. nke igwefoto dị mma, mana nwalee foto na ụfọdụ akwụkwọ edere, ha niile bịara blur. Ekwuru m, ha anaghị ejide m ọzọ
Egwuregwu 10 kachasị mma dị ka Nsogbu nke Clans
Google Keep enye gị ohere na mmelite ikpeazụ ka ịchekwaa njikọ weebụ